कुलमानलाई ओलीले लगाए यस्तो गम्भिर आरोप,ठिक कि बेटिक ? कृपया आ -आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् ! – Sunaulo Nepal TV
कुलमानलाई ओलीले लगाए यस्तो गम्भिर आरोप,ठिक कि बेटिक ? कृपया आ -आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस् !
काठमाडौ । काठमाडौ लगायत मुलुकका धेरै ठाउँमा १८ घण्टा सम्मको लोडसेडिगं हटाएर झलमल पारेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सबैले वाहवाही गरे । उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि पुन नियुक्त गर्नुपर्ने माग सबैतिरवाट उठ्यो । तर तत्कालिन ओली सरकारले उनलाई पुन दोहोर्याएन । तर शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई फेरी विद्युत प्राधिकरणमा ल्याइएको छ ।
ओली सरकारले कुलमानलाई पुन नियुक्त नगरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले हितेन्द्रलाई आयोगमा पठाएर प्राधिकरणमा पुन कुलमानलाई ल्याएको छ । ओली सरकारको यस्तो कामको ओलीले विरोध गरेका छन् । कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणका नियुक्त गरिएको र प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्यत्रै नियुक्त गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । अहिलेको सरकार ‘बहादुर’ भएको भन्दै ओलीले नक्कली ट्रान्सफरमर ल्याउने ब्यक्तिलाई खोजी खोजी ल्याएको टिप्पणी गरे ।
Previous संखुवासभामा ६ जना सामुहिक ह’त्याको नयाँ रहस्य भेटियो, प्रत्यक्षदर्शीले रुदै भने : ‘ पापीले साना छोरा छोरीलाई पनि छाडेन ‘
Next १६ वर्षीय किशोरीको बयान : चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउ दिन्छु भन्दै नौ जनाले पालै पालो ……